Saint Kotar: ichaunza kunetseka kwepfungwa uye kutenderera kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Saint Kotar: ichaunza kunetseka kwepfungwa uye kutenderera kuLinux
Mutsvene Kotar iri zita idzva raunofanira kuyeuka kana uchida mitambo yemavhidhiyo inosanganisa kusangana uye kutya kwepfungwa. Mushure memushandirapamwe wemari paKickstarter uye yekutanga nhoroondo yakaratidzirwa, ikozvino nyaya yapera uye zita riri munzira.
Iyo yese yedhijitari iyo iyo iyi Saint Kotar mutambo wevhidhiyo wakaiswa rakapendwa nemaoko, saka iine basa rakajeka kuseri kwayo. Mamiriro akanaka kwazvo uye anotonhorera kuti uzvinyurise mune izvo zvinotyisa pamwe nerwiyo rwayo kurunga nyaya ine rima uye inotyisa seri kweiyi vhidhiyo yemutambo zita.
Red Martyr Varaidzo ndiye anovandudza kumashure kweiyi vhidhiyo mutambo. Ivo havana kungokwanisa chete kupedzisa mushandirapamwe wavo we kubudirira kuwanda kwevanhu, Pane kudaro, havana chavakawana uye hapana chakaderera pane € 50178 yemari yekumisikidza chirongwa chavo. Izvo zvishoma zvishoma pane yekutanga vavariro yavakange vazvigadzirira. Naizvozvo, zvinoita sekunge avo vakaisa mari yavo kuti vawane kumberi.
Saint Kotar: Iyo Yero Mask, iyo demo, zvainakidza chose. Izvo zvimwe ndizvo zvakakwezva vese avo vakapinda mumushandirapamwe.
Ona vhidhiyo yemutambo Saint Kotar
Resumiendo izvo zvauchazowana muSaint Kotar zvakanyanya iwe unogona kuti:
Rima rerima repfungwa rinotyisa rakaiswa mutaundi diki rekumaruwa muSveti Kotar.
Ruoko-rwakapendwa nharaunda nenzimbo huru.
Pamusoro penzvimbo makumi manomwe dzekutsvaga mudhijitari.
Anenge maawa makumi maviri ekuvaraidza mutambo wemitambo nechinhu chikuru chisinganzwisisike uye chinonakidza.
Mavara maviri ekutamba nawo aine maviri anonakidza nyaya.
Sarudzo idzi dzinokanganisa nyaya.
Kutenderera kwazvino uchiri kungove wakasarudzika mune ako madhiri.
Kuvhurwa kwayo kwekupedzisira kunotarisirwa muna Nyamavhuvhu 2021, muzvitoro zvakaita seSteam, kunyangwe zuva racho raigona kuchinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Saint Kotar: ichaunza kunetseka kwepfungwa uye kutenderera kuLinux
Firefox 79 yave kuwanikwa, kusanganisira chimiro chakatotsoropodzwa nemunyori uyu munguva yakapfuura